mental illness – Healthy Life Journal
All posts tagged "mental illness"
—–၊ ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– အသက် ၅၀ အရွယ် စာရင်းကိုင်အရာရှိ မစ္စတာဒီက နာတာရှည်ခါးနာရောဂါ ခံစားနေရတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ လလောက်က ကုလားထိုင်တစ်လုံးကို ပင့်တင်ရွှေ့ပြောင်းလိုက်တာကစပြီး ခါးနာခါးကိုက် ဝေဒနာရရှိလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ဖြစ်ချင်း မိသားစုဆရာဝန်နဲ့...
စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) လယ်သမားတစ်ဦးက မုန့်ဖုတ်သမားဆီကို နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း ထောပတ်တစ်ပေါင် ရောင်းလေ့ရှိပါသတဲ့။ တစ်နေ့ကျတော့ မုန့်ဖုတ်သမားက သူဝယ်တဲ့ထောပတ်တစ်ပေါင်ဟာ အလေးချိန်မပြည့်ဘူးဆိုပြီး စိတ်တိုဒေါသထွက်ကာ ရွာလူကြီးဆီ သွားတိုင်ပါတော့တယ်။ ရွာလူကြီးက လယ်သမားကိုဆင့်ခေါ်ပြီး ထောပတ်ကိုဘယ်လိုချိန်တွယ်ပြီး ရောင်းလိုက်သလဲလို့ မေးမြန်းပါတယ်။ လယ်သမား ပြန်ဖြေတာက- “ရွာလူကြီးမင်းခင်ဗျား...
ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) ခေါင်းလောင်းနှိပ်သံကြားလို့ တံခါးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ စာရေးသူရဲ့မိတ်ဆွေကိုတာကို တွေ့ရတယ်။ “ဘယ်ကနေ ဘယ်လို ခြေဦးလှည့်လာတာလဲ” “ကြုံလို့ဝင်လာတာပါ။ မိုးခိုရင်း စကားပြောချင်လို့” “အတော်ပဲ။ မိုးတစိမ့်စိမ့်ရွာနေလို့ အပျင်းပြေ “ယူကျု”ဖွင့်ကြည့်နေတာပါ” “ယူကျုဆိုလို့ ကျွန်တော်သတိရလာတာတစ်ခုကို မေးချင်တယ်”...
ပြင်သစ်အမျိုးသားရဲ့ ၀မ်းဗိုက်ထဲမှ ပင်အပ်နဲ့ ကျိုးနေတဲ့ဇွန်းတွေအပါအ၀င် သတ္တုအစိတ်အပိုင်း ၁၀၀ ကျော် ဖယ်ရှားခဲ့ရ
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ စိတ်ရောဂါဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ အသက် ၅၂ နှစ်အရွယ် ပြင်သစ်အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ ချွန်မြတဲ့ပစ္စည်းတွေကို အကြိမ်ကြိမ်မျိုချနေတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ သတ္တုပစ္စည်းတွေစုပုံလာကာ ကိုယ်အင်္ဂါတွေကို ထိုးဆွလာတာကြောင့် ခွဲစိတ်မှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ သတ္တုအစုအပုံကြောင့် သွေးအန်တာ၊ ပြင်းပြင်းထန်ထန်နာကျင်တာတို့ ခံစားခဲ့ရပြီး ၅နှစ်အတွင်း အရေးပေါ်ခွဲစိတ်မှု ၅...
နွားတင်းကုပ်ထဲတွင် ၁၇ နှစ်ကြာ သံခြေချင်းခတ်ခံထားရသည့် စိတ်ဝေဒနာသည်
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း ဂွမ်ဒေါင်ခရိုင်မှာ နေထိုင်တဲ့ အသက် ၅၆ နှစ်အရွယ် စူဂူအောက်ဖာဟာ ၂၀၀၀ ခုနှစ်ကတည်းက မိသားစုနေအိမ်မှာ အကျဉ်းချခံထားခဲ့ရပါတယ်။ ကြမ်းတမ်းဒေါသထွက်တတ်တဲ့ စိတ်ဝေဒနာသည်စူဟာ လူတွေကို ခြိမ်းခြောက်ရန်ပြုတတ်သလို အိမ်နီးနားချင်းတွေနဲ့ မကြာခဏရန် ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ အိမ်နီးချင်းတွေ...
ကာရာအိုကေက မိန်းကလေးတွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းရှုပ်မိပါတယ်ဆရာ
ပါမောက္ခဒေါက်တာဥာဏ်ဝင်းကျော် (ဦးနှောက်နှင့် စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုနိုင်ဦးဟာ သွက်လက်ချက်ချာပြီး အလုပ်ကို ကြိုးစား လုပ်ကိုင်သူဖြစ်တဲ့အတွက် အထက်လူကြီးတွေက အလွန်သဘောကျလှပါတယ်။ သူလုပ်တဲ့အလုပ် တွေကလည်း အောင်မြင်မှုရရှိတဲ့အတွက် အလုပ်ထဲမှာ ရာထူးတွေအဆင့်ဆင့်တိုးရင်း မန်နေဂျာအဆင့်အထိ ရာထူးတိုးမြှင့်ခံရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မန်နေဂျာ ဖြစ်လာတဲ့အခါ ကိုနိုင်ဦးက...
ဖေ့စ်ဘွတ်ဟက်ပြီး လိုက်နှောင့်ယှက်နေတယ် ဆရာ . . .
ပါမောက္ခဒေါက်တာဥာဏ်ဝင်းကျော် (ဦးနှောက်နှင့် စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) နယ်မြို့လေးတစ်မြို့မှာ ၁၀ တန်းအောင်ခဲ့တဲ့ ကြာဖြူဟာ ရန်ကုန်မြို့က အဆောင်တစ်ခုမှာ နေပြီး ကွန်ပျူတာသင်တန်းတက်နေသူပါ။ လူတွေနဲ့ ရောရောထွေးထွေး မနေတတ်တဲ့ ကြာဖြူက အဆောင်မှာ တစ်ယောက်ခန်းကိုသာ ရွေးငှားခဲ့ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာသင်တန်းကို တက်နေရာကနေ နှစ်လအကြာမှာတော့ ကြာဖြူသင်တန်းကို...
စိတ်ဝေဒနာရှင်ခင်ပွန်းကို လုပ်ငန်းခွင်သို့ နေ့တိုင်းခေါ်နေသည့် တရုတ်သန့်ရှင်းရေးသမား
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ တရုတ်အနောက်တောင်ပိုင်းမှ လမ်းသန့်ရှင်း ရေးသမားတစ်ယောက်ဟာ အိမ်မှာစောင့်ရှောက်မယ့်သူမရှိတာကြောင့် စိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ ခင်ပွန်းသည်ကို လုပ်ငန်းခွင်သို့ ခေါ်ဆောင်နေရတာ ၃နှစ်တိုင်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၅၁ နှစ်အရွယ် ချန်းရွန်က စီချွမ်ခရိုင်မှ စတုရန်းမီတာ ၄၀၀၀ အကျယ်နေရာကို နေ့စဉ်သန့် ရှင်းရေးလုပ်ရပြီး...
စိတ်ဝေဒနာကို ပယောဂလို့ မထင်ပါနဲ့ . . .
မေး. တွံတေးမြို့နယ်၊ ၁၉ မိုင်ကုန်းက ရွာလေးတစ်ရွာမှာ ကလေးသုံးဦးကို ပယောဂ၀င်တယ်ဆိုပြီး ပယောဂဆရာက ကုသလိုက်၊ ရိုက်နှက်လိုက်၊ ကန်ကြောက်လိုက်လုပ်ရင်း သေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်က လူအတော်များများကို ထိတ်လန့်စေခဲ့ပါတယ်။ ကရုဏာဒေါသလည်း ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီရွာက လူတွေကတော့ ဒီဆရာသာမကုပေးရင် ကလေးတွေက သူတို့ကိုကိုက်စားတော့မှာလို့လည်း...
စိတ်မနှံ့သည့် ၈နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်ကို အိမ်ရှေ့က သစ်ပင်မှာ ခြောက်နှစ်ကြာကြိုးချည်ထား
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ စိတ်မနှံ့တာကြောင့် အသက်၈နှစ်အရွယ် ကလေးမလေး ကို အဘိုးအဘွားတွေက သစ်ပင်မှာ ကြိုးချည်ထားတာ ၆ နှစ် ရှိခဲ့ပြီလို့ သိရပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဟီနန်ခရိုင်ကျေးရွာတစ်ရွာမှ ဇျောင်ဇိယီ ဆိုတဲ့ ကလေးဟာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်က အပြင်းဖျားခဲ့ပြီးနောက်...